Bulshada Rayidka ah waxay sii wadi doontaa u -doodista Afgaanistaan ​​- Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Markii 30 -kii Ogosto Golaha Ammanka ee Qaramada Midoobay u caddeeyay Taalibaan inay la socon doonto oo si firfircoon uga qaybqaadan doonto xaaladda xuquuqda aadanaha ee Afgaanistaan, waxay kor u qaadday caqabadda bulshada rayidka ah inay sii socoto iyo inay kordhiso tallaabadeeda si ay ugu dooddo sababaha aadanaha. ammaanka dadka Afgaanistaan.
"Si aad u sii haysato Arrinta"
Erayadii ugu dambeeyay ee Qaraarka Golaha Amaanka ee 2593 [S/RES/2593, oo la ansixiyey Ogosto 30, 2021], "Go’aamiya in lagu sii haysto arrinta ”, luqadda caadiga ah macnaheedu waa“ Waan la socon doonnaa tan. ” Markaa waa inay, sidaan oo kale, dhammaan u dhaqdhaqaaqayaasha bulshada rayidka ah, cadaadis ku saarnaa dowladahayaga iyo UN -ka inay si ammaan ah u daadgureeyaan dhammaan kuwa ku sii jira halista Afgaanistaan ​​iyo inay hubiyaan amniga kuwa hadhay.
Qaraarku wuxuu ahaa hadalkii labaad ee ujeeddada beesha caalamka ee ah in Taalibaan lagu hayo dhowrista heerarka aasaasiga ah ee xuquuqda aadanaha sida ay waajib ku tahay dhammaan xubnaha bulshada. Isaga iyo bayaannadii kale ee dhawaanahan waxay ku wargelinayaan Taliban, sida ay ku boorriyeen bulshada rayidka ah, in u hoggaansanaanta heerarkan ay tahay aasaaska aasaasiga u ah aqbalitaankooda aadka loo doonayo ee "bulshada quruumaha." Dawladaha iyo muwaadiniintu waa inay la falgalaan Taalibaan, oo hadda ah dawladda dhabta ah ee Afgaanistaan, taasoo caddaynaysa in ku -xadgudubidda halbeegyada ay halis gelinayso aqbalaadda caalamiga ah.
Waxaan qaadanaa xoogaa rajo ah in halbeegyada loo fiiriyo natiijada Bayaan Wadajir ah oo ku saabsan Afgaanistaan ​​Hubinta Safarka iyagoo ugu baaqay Taliban inay u oggolaato dhammaan kuwa doonaya ama u baahan inay ka baxaan Afgaanistaan ​​inay si nabad ah ku tagaan. Danjireyaasha Qaramada Midoobey sida Geraldine Byrne Nason oo u dhashay Ireland ayaa caddeeyay in Qaramada Midoobay ay kula xisaabtami doonto Daalibaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo wax kasta oo loo diido sharafta haweenka iyo madaxbannaanidooda, halbeegyada ay tahay in ay buuxiso dowlad kasta oo dooneysa in laga aqbalo beesha caalamka. Annagu haddaan nahay bulshada rayidka waxaan si aad ah u rajaynaynaa in markan, amarradaas la dhaqan -gelin doono, ee aysan ahaan doonin hadallada kor u qaadaya rajada iyadoon la qaadin tallaabada “haynta la haysto” ay soo jeedinayso.
Waxay noqon doontaa qayb weyn annaga bulshada rayidka ah inaan hayno dowladaha iyo UN -ka mas'uul ka ah inay raacaan dhammaan fursadaha waxqabad. Annaga la'aanteen, kuwa bulshada rayidka ah oo qaaday tallaabooyinkii ugu horreeyay ee ku aaddan sameynta xeerarka xuquuqda haweenka waxaa xigatay Pramila Patten, oo ah Agaasimaha Fulinta Haweenka Qaramada Midoobay bayaankeeda xooggan waxa beesha caalamku, ka dalban doonto Taliban, dalabaadkaas ayaa laga yaabaa inay si fiican u hadlaan.
Bulshada rayidka ah ee caalamku way sii ahaan doontaa mid la qabsado arrinta, iyadoo sii wadaysa inay cadaadis ku saarto dawladahayaga iyo Qaramada Midoobay inay sii ahaadaan kuwo la qabsaday si loo xaqiijiyo daadgureynta dhammaan kuwa hadda halista ku jira iyo in la tirtiro halista haweenka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah ee ku haray Afgaanistaan.
Betty Reardon oo ku saabsan waxbarashada xaqiijinta qiimaha bulshada
October 7, 2020 Quotes 1
Inta badan… waxay isku raacsan yihiin inaysan jirin waxbarasho dhexdhexaad ah. Waxbarashadu waa shirkad bulsho oo loo sameeyo xaqiijinta qiyamka bulshada. Su’aashu waxay tahay waa maxay qiyamka ay tahay in lagu xaqiijiyo waxbarashada, iyo sidee ”. -Betty Reardon [sii wad akhriska…]
Barida ku saabsan Nabadeynta iyo Nidaamyada Amniga Beddelka ah
November 8, 2018 CV, Features, Warar & Muuqaal 6
Qoraalkan ay soo saartay Betty Reardon ayaa ah kii labaad ee taxane ah oo lagu sahaminayo Betty 6-dii sano ee nabada barashada. Qoraalkan, Betty waxay ka faallooneysaa "Nabad ilaalinta," cutub manaahij ka ah taxanaha dugsiga sare ee "Aragtida Caalamka," oo la daabacay 1973. Faallooyinka Betty ee halkan waxay diiradda saaraysaa laba qaybood oo lagu baaro qaabab nabadeed iyo nabadgelyo kale. Waxaan maqaalkan ku dhajineynaa sannad-guuradii 100-aad ee "Maalinta Xagjirnimada," oo calaamadeeyay dhammaadka dagaalladii WWI (Nov. 11, 1918). Dagaalkii “Dhammaadka Dagaallada oo dhan” wuxuu isu beddelay ballan qaad been ah oo caddeyn u ah ku adkaysiga dagaalladii waaweynaa illaa 20-kii illaa iyo qarnigii 21-aad. Wax badan ayaa naga dhiman inaan ka barano masiibadan, waana rajadeenna in himilada iyo dhiirrigalinta Betty ee "Waxbaridda ku saabsan Nabadda iyo Nidaamyada Amniga Beddelka ah" ay naga caawin karto safarkaas. [sii wad akhriska…]
Farriin ka socota Betty Reardon
January 15, 2019 Features, Warar & Muuqaal 0
Daahfurka Bilaha Labaad ee $ 90K: Hindisaha Cusub, Fursadaha Cusub. Waxaan hadda nahay saddex meelood meel ka mid ah habka loo galo ololaha IIPE / GCPE kaas oo aan rajeyneyno in aan soo uruurinno $ 90k si loo joogteeyo dhaqdhaqaaqyadan oo noqday bulsho caalami ah oo barayaasha nabadda ah. Xubin ka mid ah bulshadayada ayaa ku deeqday tabarucaad labaad oo la mid ah: ballanqaad kasta oo waara oo $ 19 doolar ah, deeq bixiyuhu wuxuu bixiyaa hal $ 19 oo dheeri ah oo dheeri ah. Waxaan rajeyneynaa inay taasi ka dhigan tahay $ 19s dheeraad ah! [sii wad akhriska…]